Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » SeaWorld San Antonio dia manokatra toeram-ponenana haran-dranomasina manara-penitra
Androany, namoaka ny Turf Reef ny SeaWorld San Antonio, izay ahitana fonenana biofiltration voalohany. Ny mpitsidika dia afaka mijery akaiky ireo sokatra tandindonin-doza sy voavonjy sy trondro maro loko, raha mianatra bebe kokoa ny fiantraikan'ny olombelona amin'ny ranomasina.
Ankoatr'izay, ny valan-javaboary dia nanokatra mitaingina fientanam-po vaovao roa izay manatsara kokoa ny lohahevitra manintona ny fiarovana ny fano an-dranomasina. Riptide Rescue dia traikefa nahafinaritra nanavotra, nitondra fianakaviana nanao iraka mba hanampy amin'ny famonjena ny biby an-dranomasina sy ny Sea Swinger, fiakarana an-tsambo mahery vaika izay handefa mpitaingin-tsoavaly amin'ny arc izay mitovy amin'ny tany eo an-tampon'ny làlan-kalehany, alohan'ny handefasana azy ireo hiakatra amin'ny teboka iray ihany amin'ny lalana mifanohitra — segondra vitsy monja.
Ireo fitsangantsanganana ireo sy ny toeram-ponenan'ireo sokatra dia manamarika ny taona fahadimy nifandimbiasan'ny valan-javaboary manintona vaovao.
Ny tontolon'ny haran-dranomasina misy karazan-dranomasina misy 126,000 250 galona an'i Turtle Reef dia noforonina ho rafitra biofiltration voajanahary hananganana rafitra fanivanana voajanahary voajanahary mifototra amin'ny tontolo iainana izay manintona ny fiainana dia sy mampihena ny fanjifana rano sy angovo ao amin'ny valan-javaboary, ahafahan'ny valan-javaboary manatsara ny tontolo iainana iraka. Ity honenana biodynamika sy karazan-karazany ity dia honenan'ireo sokatra an-dranomasina voavonjy sy tsy votsotra ao amin'ny fikarakarana an'izao tontolo izao an'ny SeaWorld, ao anatin'izany ireo sokatra maitso tandindonin-doza, ary Big Mama, sokatra an-dranomasina milanja XNUMX kilao voavonjy amoron-tsiraka ao amin'ny Helodrano Mexico aorian'ny nahitana ratra be teo anoloana sy teo an-damosiny.
Dan Ashe dia filoham-pirenena sy tale jeneralin'ny Association of Zoos and Aquariums, ary talen'ny US Fish and Wildlife Service. Hoy izy: “Ny Turtle Reef dia maneho ny fanoloran-tenan'ny SeaWorld amin'ny fiarovana ny ranomasina. Ity mpivady fampirantiana mahatalanjona ity dia nanandindomin-doza ny famonjena ny sokatra an-dranomasina tamina traikefa vahiny nahasarika sy nanentana ny fanahy, ary mampiasa filtration biodinamika manara-penitra. Mampiseho ny fitarihana omen'ny akondro sy zezika maoderina sy ofisialy amin'ny famonjena ny biby tsy ho lany tamingana. ”
"Ny fahalotoan'ny ranomasina, ny fiparitahan'ny solika ary ny fahasimban'ny toeram-ponenana no fanamby lehibe atrehin'ireo sokatra an-dranomasina, ary ny Turtle Reef dia manome fotoana misitrika ho an'ireo vahiny hianatra ny fomba hanampiany ilay karazana," hoy ny filohan'ny valan-javaboary SeaWorld sy Aquatica San Antonio, Carl Lum. "Faly izahay mampiseho ny karazan-javaboary mbola tsy naseho talohan'izay tao amin'ny SeaWorld San Antonio, sady mampianatra ny vahiny momba ny iraka ataontsika hiarovana ny biby sy ny toeram-ponenana manerantany."
Ny SeaWorld San Antonio dia faly hiara-hiasa amin'ny The University of Texas Marine Science Institute's Amos Rehabilitation Keep (ARK) ho mpiara-miombon'antoka amin'ny fiarovana ny Turtle Reef. Dimy isan-jaton'ny vola azo avy amin'ny fividianana ny varotra sokatra voafidy amidy ao amin'ny SeaWorld San Antonio no handeha ho any amin'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra izay ny iraka voalohany dia ny famonjena sy ny famerenana amin'ny laoniny ireo sokatra marary, vorona, sokatra terrestrial ary sokatra hita manamorona an'i South Texas. morontsiraka
"Voninahitra ho anay ny miditra ao amin'ny SeaWorld San Antonio amin'ny fanoloran-tena niarahanay nanasongadinana ny fahantran'ny sokatra tandindomin-doza any an'ala," hoy ny Dr. Robert Dickey, talen'ny The University of Texas Marine Science Institute. "Ity fampirantiana ity dia hanampy amin'ny fanohanana ny asa fanavotana ny bibidia sy ny fanabeazana an'ny Amos Rehabilitation Keep (ARK) ao Port Aransas, ary hanatsara ny fahatakarana ampahibemaso ny fahasamihafana misy eo amin'ny fiainana an-dranomasina izay tsy maintsy arovantsika amin'ny taranaka ho avy."